Ogaden News Agency (ONA) – Daawo:Kulankii Baarlamaanka Wayaanaha oo Lagu Kala Kacay & Shirkii EPRDF oo Soodhamaaday.
Daawo:Kulankii Baarlamaanka Wayaanaha oo Lagu Kala Kacay & Shirkii EPRDF oo Soodhamaaday.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in lagu kala kacay fadhigii baarlamaanka ee shalay oo Jumce ahayd lagu waday in uu kaqabsoomo guriga baarlamaanka wayaanaha ee magaalada Addis Ababa.
Sida xogta aan kuhelayno fadhiga baarlamaanka ayaa lagu kala dhaqaaqay kadib markii xubnaha baarlamaanka ah ee udhashay qoomiyada Tigrey ay damceen in wax kasta ay sidii hore kusocdaan, hase yeeshee waxaa barnaamijkaas is hortaagay xubnaha baarlamaanka u matala qoomiyadaha Axmaarada iyo Oromada.
Afhayeenka baarlamaan Goboleedka Oromia oo ah xubin katirsan baarlamaanka wayaanaha ayaa fadhiga baarlamaanka ka horsheegay in lagu kala kaco fadhiga wuxuuna sababta kusheegay in sasbursi dhanka qoomiyadaha ah uu kajiro baarlamaanka gudihiisa, wuxuuna sheegay in howlahaas si dhab ah wax looga qabto.
Golaha baarlamaanka wayaanaha ayaa lasheegay in ay wax u qaybsadaan si isla eg taas oo qoomiyada Oromada oo 40 milyan ah iyo qoomiyada Tigrey oo 5 milyan ah isku xuquuq siinaysa, taas oo sida ay beelaha waawayn kudoodayaan aan ahayn qaab isu dheeli tiran.
Dhinaca kale waxaa isla magaalada Addis Ababa kusoo gabagaboobay shirkii urur kusheega EPRDF, kaas oo laga soo saaray bayaan umuuqday in lagu qancinayay dadkii shacabka ahaa ee ka dhursugayay natiijada shirkii la isku maandhaafay ee ururka EPRDF.
Bayaanka kasoo baxay EPRDF ayaa lagu sheegay in ururka EPRDF uu galay khaladaad dhinaca maamulka iyo maaraynta ah kaas oo sida bayaanka lagu sheegay ay sameeyeen shakhsiyaad aan aqoon lahayn.
Bayaanka ayaa lagu yidhi waxaan qiraynaa in uu jiro khaladaad dhinaca ururka EPRDF ah waxaana kurajo waynahay in aan saxno dhamaan wixii soo khaldamay, iyagoo sheegay in lala xisaabtamo doono xubnaha khaldamay.
Dadka siyaasada Itoobiya udhuun duleela ayaa sheegaya in ay kooxda TPLF diyaarinayso qorshihii ay ugu kiis bixi lahayd xubno udhashay qoomiyadaha Axmaarada iyo Oromada kuwaas oo xilalkooda waayi doona. Sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay mid bulshada kacsan lagu daminayay waana mid kamid ah qorshayaasha taliska wayaanaha.